Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ naghachi kọntaktị si iPhone 4S n'onwe ya?
M na mberede ehichapụ ọtụtụ kọntaktị site na m iPhone 4S, na-echefu ndabere ha elu na iTunes. Ugbu a, m mkpa ha ngwa ngwa, ma m na na na nụrụ na ọ dịghị ụzọ naghachi ehichapụ data na ihe iPhone ma ọ bụghị site ndabere. Bụ na n'ezie? Enwere m ike naghachi data si iPhone onwe ya na-enweghị iTunes ndabere? Biko nyere! Daalụ n'ọdịnihu.
The na-ekwu na e nweghị ụzọ naghachi iPhone data enweghị iTunes ndabere bụ nnọọ ihe ọjọọ. Ruru ka pụrụ iche nkà na ụzụ nke iOS ngwaọrụ, ọ bụ nnọọ ike na-agbake data kpọmkwem site iPhone onwe ya, ma ọ bụghị ihe agaghị ekwe omume. E nwere n'ezie dị otú ahụ a na omume nke na-enyere gị iji naghachi kọntaktị site na iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS enweghị iTunes ndabere faịlụ: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone _1_672_1 _) (Win) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS ( iPhone Data Recovery) (Mac) (maka Mavericks).
Cheta na: Ọ bụrụ na ị synced gị iPhone na iTunes na PC gị na ma ọ bụ Mac tupu adịkwa kọntaktị gị, ị nwekwara ike naghachi gị aga na kọntaktị site adịrị ndị iTunes ndabere.
Nzọụkwụ nke otú naghachi iPhone kọntaktị na-enweghị ndabere
The nkuzi n'okpuru bụ banyere Windows version nke Wondershare Dr.Fone maka iOS. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, biko gụọ ndu n'ihi na Wondershare Dr.Fone (Mac) ebe a: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Mac) User Guide.
Tupu agbake ehichapụ iPhone kọntaktị, mkpa ka ị mara na ị na-ekwesịghị iji gị iPhone maka ihe ọ bụla mgbe ị kwụsịrị kọntaktị gị, n'ihi na ọ bụla ọrụ na gị iPhone nwere ike overwrite furu efu data. Ụzọ kasị mma bụ na ike anya gị iPhone ruo mgbe ị na-na na weghachi furu efu iPhone kọntaktị.
Ugbu a na-agbaso ọzọ nzọụkwụ naghachi ehichapụ iPhone kọntaktị enweghị ihe ọ bụla ndabere faịlụ.
Nke mbụ niile, jikọọ gị iPhone gị na kọmputa, na mgbe ahụ na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS. Ebe a na-atọ mgbake ụdịdị nyere: naputa site na iDevice, naputa site na iTunes ndabere File na-agbake site iCloud ndabere File. Dị nnọọ ịnọ ndabara otu.
N'ihi na dị iche iche iPhones, ị nwere ike tinye dị iche iche mgbake ụzọ mgbe ị jikọọ gị iPhone. N'okpuru ebe bụ isi window nile iPhones.
N'ihi na iPhone 4 / 3GS, ị nwere ike họrọ gaa Advanced Mode iji nweta a miri Doppler n'ihi na gị iPhone. Dị nnọọ pịa bọtịnụ na ala nri-akuku.
Nzọụkwụ 2. iṅomi ehichapụ kọntaktsị na gị iPhone
Dị ka iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4S ọrụ, ị nwere ike ozugbo pịa "Malite iṅomi" button Mgbe ejikọta ngwaọrụ gị. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga na-akpaghị aka na-amalite na iṅomi gị iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4S maka ehichapụ kọntaktsị na ya.
Naghachi ehichapụ kọntaktị kpọmkwem site iPhone 4 / 3GS, gị mkpa iji tinye ngwaọrụ scanning mode tupu iṅomi. Soro nzọụkwụ n'okpuru:
Jide gị iPhone na pịa "Malite" bọtịnụ.
Pịa Ike na Home buttons na gị iPhone n'otu oge maka kpọmkwem 10 sekọnd. The software ga gụọ oge maka gị.
Mgbe 10 sekọnd agafewo, hapụ Ike button ozugbo, ma ịnọgide na-ejide ndị Home bọtịnụ. Mgbe ọzọ 10 sekọnd, ị ga-asian na ị na-aga nke ọma banyere usoro na ị nwere ike hapụ Home button ugbu a.
Mgbe ihe omume ahụ na-amalite iṅomi gị iPhone maka ehichapụ kọntaktị, na windo dị ka n'okpuru.
Nzọụkwụ 3. Preview & naghachi ehichapụ iPhone kọntaktị
Mgbe Doppler, ị nwere ike ihuchalu niile data na a hụrụ site Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery). Họrọ "Ndi ana-akpo" na n'aka ekpe ma ị nwere ike ihuchalu gị niile ehichapụ kọntaktị ebe a dị ka ndị na, gụnyere ọrụ utu aha, adreesị, na ndị ọzọ.
The data ịchọta ebe a na-agụnye ndị kọntaktị i nwere na gị iPhone ugbu a. Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị iji weghachite ehichapụ kọntaktị site na gị iPhone, gbanwee bọtịnụ n'elu on: Nani gosipụta ehichapụ ihe. Mgbe ahụ akara na-agbake ha. I nwekwara ike ịlele video nkuzi maka a ndu:
Cheta na: Ị nwere ike mbubata natara kọntaktị azụ gị iPhone, i nwere ike iji Wondershare TunesGo, nke-enye gị ohere mbubata na mbupụ iPhone kọntaktị kpam kpam.
> Resource> iPhone> Olee naghachi ehichapụ iPhone Ndi ana-akpo enweghị ndabere